Madaxwayne kuxigeenka Puntland iyo guddiga nabadgalyada gobolka Bari oo Bosaso uga shiray amniga (sawiro) – Radio Daljir
Madaxwayne kuxigeenka Puntland iyo guddiga nabadgalyada gobolka Bari oo Bosaso uga shiray amniga (sawiro)
Luulyo 13, 2019 2:01 g 0
Madaxwayne kuxigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan “Karaash” iyo guddiga nabadgalyada ee magaalada Bosaso ayaa maanta ku kulmay xarunta gobolka Bari ee Bosaso.
Duqa magaalada Bosaso Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan ayaa ka warbixiyay ujeedada kulanka, waxaana uu yiri.
“Waxaa Madaxtooyada magaalada Boosaaso noogu qabsoomay shirkii Amniga gobolka Bari oo uu shir guddoominayey Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash, ujeedada ugu weyn ee laga wada-hadlaayeyna waxa ay ahayd sidii looga wadashaqayn lahaa Amniga magaalada, sidii isku xidh amni loo helilahaa”
Duqa ayaa dhanka kalle sheegay maadxwayne kuxigeenka inuu wax ka ogaanayo mashaariicda gobolka.
“iyo in Madaxweynuhu warbixin ka qaato qorshayaashii hore wixii ka qabsoomay ee dowladdu dejisey, waxa qabyada ka ah iyo sababta ay u qabsoomiwaayeen, waxaan rajaynaynaa xogta iyo shaqooyinka aanu qabanay ee aanu u gudbiney inuu la wadaago xukuumadda, sidoo kale waxaan rajaynaynaa inaan hirgelino talooyinka iyo amaawiirta uu nafaray” Ayuu yiri Duqa degmada Boosaaso.
Bosaso: 21 Carruur oo laga soo xaday Muqdisho iyo gobolada u dhow oo dib loo celiyay (daawo)
Duqa Muqdisho oo dib-u-soo celiyay guri xoog lagu gaystay 28 sano (sawirro)